လွယ်ကူ ရိုးရှင်း ပြုပြင်ခြင်း (EVD ရောဂါ အဖြေရှာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Consumer Electronics » လွယ်ကူ ရိုးရှင်း ပြုပြင်ခြင်း (EVD ရောဂါ အဖြေရှာ)
လွယ်ကူ ရိုးရှင်း ပြုပြင်ခြင်း (EVD ရောဂါ အဖြေရှာ)
- ko ko gyi
Posted by ko ko gyi on Aug 29, 2011 in Consumer Electronics | 17 comments
စက်ပြင် ၀ါသနာ ပါသူများအတွက် အီလက်ထရောနစ် စက်ပြင်ဗဟုသုတ
မြန်ဆန်စွာတိုးတက်နေတဲ. အီလက်ထရောနစ်ခေတ်ကြီးထဲမှာ အိမ်တိုင်းမှာတော. အောက်စက်လို.ခေါ်တဲ. DVD , EVD တစ်လုံးကတော.ရှိကြမှာပါ။ ၀င်လာတာက တရုတ်နိုင်ငံဘက်က အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဈေးကလဲပေါတော. အရည်အသွေးကတော.မကောင်းတာ သေချာတယ်ဗျာ။ ခဏခဏပျက်တယ် ၊ ၀ယ်ပြီးမကြာခင်ပျက်တယ်။ ပျက်တဲ.အထဲမှာ No Disc လို.ခေါ်တဲ. အခွေမဖတ်တာကလဲ အများဆုံးကြုံရပါတယ်။ ဒီလိုပျက်စီးပုံမျိုးကို ကျနော်တို.ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူပြုပြင်လို.၇နိုင်မယ် နည်းလမ်း၊ ဘယ်နေရာကပျက်နေလဲ သိနိုင်မယ်.နည်းလမ်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးမပြည်.စုံရင်တောင် ကိုယ်.စက်ပျက်လို. တစ်ခုခုလေး အရင်ထက်ပိုသိသွားမယ်ဆိုရင် ကျနော် ကျေနပ်ပါတယ်။ (တစ်ခုခုထပ်သိချင်တာ၇ှိရင်လဲ ကွန်မန်.ကတစ်ဆင်. မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။)
(No Disc ပြခြင်း)….
၁။ ကျနော်တို. ပထမဆုံးလုပ်သင်.တာက စက်ဖုံးကိုဖွင်.ပြီး Pick-up Unit လို.ခေါ်တဲ. လေဆာဖတ်ခေါင်းအစုအဝေး( အများအခေါ် DVD မီးလုံးပေါ.ဗျာ) ကနေ လေဆာ အလင်းထွက်မထွက် ဦးစွားစစ်ဆေးသင်.ပါတယ်။ ဘာကြောင်.လဲဆိုတော. ဒီလေဆာ အလင်းမထွက်နိုင်ရင် စီဒီ ထဲကအချက်အလက်ကို ဖတ်ယူလို.မရပါဘူး။
၂။ ကဲ လေဆာမထွက်ဘူးဆိုရင်တော. Pick-up Unit(မီးလုံး) ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ. ကြိုးပြားလေးကိုလဲလှယ်ကြည်.ပါ။( DVD ကြိုးပြားလို.မေးဝယ်ပါ။ ၁၀၀ ပဲရှိပါတယ်)
၃။ ဒါမှ လေဆာအလင်းတန်းမထွက်သေးဘူးဆိုရင်တော. Meganism (စက်မှုလှုပ်ရှားပိုင်း) အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးပါ။
၄။ စက်မှုလှုပ်ရှားပိုင်းက အားလုံးအိုကေပြီး လေဆာအလင်းမထွက်သေးဘူးဆိုရင်တော. ၁..Pick-up Unit..၂။ Video Decoder Card ( ရုပ်ကဒ်လိုလဲ ခေါ်ကြပါတယ်) တစ်ခုခုပျက်နေတာသေချာနေပါပြီ။
(လေဆာထွက်ပြီး No Disc ပြခြင်း)
No Disc ပြလို.အဖုံးကိုဖွင်.ပြီး လေဆာထွက်မထွက်ကြည်.လိုက်တော. Pick-up Unit ကလေဆာထွက်နေပါတယ်။ ဒီလိုလေဆာထွက်ပြီး No Disc ပြနေတယ်ဆိုရင်တော.
၁။ Pick-up Unit ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ. ကြိုးပြားလေးကို လဲကြည်.ပါ။(လေဆာထွက်တိုင်း ထိုကြိုးပြားကောင်းသည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်)
၂။ ကြိုးပြားလဲကြည်.လို.မှ အခွေမဖတ်သေးဘူးဆိုရင် Spindle Motor လို.ခေါ်တဲ. ဓာတ်ပြားကိုလည်ပတ်ပေးတဲ. မော်တာကို လဲပေးပါ။(DVD မော်တာလို.မေးဝယ်ပါ။ တစ်လုးံကို ၆၀၀ ပါ)။
၃။ မော်တာလဲတာလဲ အခွေမဖတ်သေးဘူးဆိုရင် Pick-up Unit (မီးလုံး သေချာပေါက် လဲရတော.မှာပါ) သူနံပါတ်တွေကတော. HD 60, HD 62 ,HD 65 တို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံကို ၄၅၀၀ ကျပ်ပဲရှိပါတယ်။
About ko ko gyi
View all posts by ko ko gyi →
ပုံတွေတင်တာ သိပ်အဆင်မပြေပါခင်ဗျ..တောင်းပန်ပါသည်။ အခုပို.စ်မှာ ၁။ လေဆာမထွက်ပဲ No Disc ပြတာနဲ. လေဆာ ထွက်ပြီး No Disc ပြခြင်း။ ပြစ်ချက် ၂ မျိုးတင်ပြထားပါတယ်။ နောက်ကျန်နေခဲ.တာက VCD ခွေဖတ်ပြီး DVD ခွေမဖတ်တဲ. အကြောင်းကျန်ခဲ.ပါတယ်။ အခုမှ စရေးလို. တစ်ချို.ဟာတွေအခက်အခဲတွေ.ပါတယ်။ ဗဟုသုတပေးချင်တဲ. ဆန္ဒကြောင်.ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ဒီလိုမျိုး ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ပိုစ်တွေလည်း များများ ရှိသင့်ပါတယ်။
pickup unitမှာ adjust လုပ်လို့ ရတဲ့ tremor လေး ၂ ခုကို အရင် ချိန်ကြည့်ပါ။
အဲဒီ pick-up unit ရဲ့ pcb ပေါ်မှာ vcd နဲ့ dvd ဆိုပြီး tremor ၂ ခု တွေ့ မှာပါ။
dvd မဖတ်ရင် dvd ကိုချိန်ပါ။vcdဆိုရင် vcd ကို ချိန်ပါ။ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ။
သူက လေဆာမီးအားကိုချိန်ပေးတာ မို့ သတိရှိ ဖို့လိုတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ပြန်ဝယ်ရမယ့်အတူ မထူးပါဘူးဆိုပြီး ကလိလို့ ရပြီ ဟီးဟီး
အမယ်မင်း!! မျက်နှာစိမ်းကြီးနဲ့ သွားတွေက အားကောင်းလှချည်လား ဟ
ကျေးဇူးတင်တယ် ကို ကိုကိုဂျီးရေ………. ဒါမျိုးတွေ့ တာ ဒါပထမဆုံးပဲ
ဒီလိုပဲလေ … သွားကောင်းကြောင်း ကြုံတုန်းလေး ပြရတာ ဟဲဟဲ
မိသားစုတိုင်း ကြုံရနိုင်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေပါ
နားလည်လို့ လုပ်ရင် ၁၀၀/၂၀၀ ပဲ ကုန်ကျနိုင်တယ် ဆိုပေမဲ့ ၊
နားမလည်ရင် အချိန်လဲပေးရ ၄/၅၀၀၀ လဲကုန်ပါတယ်
Harrumoto ပြောသလိုပဲ Pick-up Unit မှာ adjust လုပ်လိုရတဲ. Pre-set Control လေး ၂ ခုပါပါတယ်။ ဒါပေမယ်. လေဆာမထွက်တဲ.အချိန်မှာတော. သူ.ကို ဘယ်လိုပဲချိန်ချိန်။ လေဆာကတော.ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ချိန်သင်.တဲ.အချိန်က လေဆာထွက်ပြီး no disc ပြတဲ.အချိန်နဲ. vcd ဖတ်ပြီး dvd မဖတ်နိုင်တဲ. အခြေအနေများမှာ ချိန်သင်.ပါတယ်။ (ကျနော်အတွေ.အကြုံအရတော. ဒီလိုချိန်ခြင်းက ၃ လုံးမှာ ၁ လုံးလောက်သာ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ.တစ်လုံးကလဲ သိပ်ကြာကြာမခံပဲ ပြန်ပျက်သွားတတ်လို.ပါ)။
မှတ်ချက်။ ။ VCD ခွေဖတ်ပြီး DVD ခွေမဖတ်ပါက
၁။ Cover Lens လို.ခေါ်တဲ. Lens ရဲ.မျက်ကြည်လွာလေးကို နားကြပ်တဲ. ဂွမ်းလိပ်လေးနဲ. သန်.၇ှင်းပေးပါ။
၂။ Spindle Motor (ဓာတ်ပြားလည်ပတ်ပေးသည်.မော်တာ) လဲပေးပါ
(vcd ခွေဖတ်နေသည်.အတွက် ကြိုးပြားကောင်းပါသည်။ လဲရန်မလိုပါ)
၃။ မော်တာလဲသော်လည်း DVD ခွေမဖတ်ပါက Pick-up Unit တွင်ရှိသော Pre-set Control အား adjust လုပ်ပေးပါ။
၄။adjust လုပ်သော်လဲမရပါက Pick-up Unit အားအသစ်လဲလှယ်ပေးပါ…။
နိုင်ခြံဂါး မှာ ၀ယ်တဲ့ စက်က မြန်မာခွေ မဖတ်တာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲပြောပေးပါဦး ကို ကိုကိုဂျီး
အဘ ကာရာအိုကေဆိူချင်လို့ ၀ယ်လိုက်တာ အခုဂျောင်ထိုးထားရတယ်။
ကိုကိုဂျီး..တောက ကျူပ်ခယ်မ EVD က ကိုကြီးယား အတွဲကားတွေဆိုရင် အခန်း ၂ ခု ၃ ခုပဲဖတ်လို.၇တယ်ဗျ။ နောက်က အပိုင်းတွေဆို ဖတ်လို.မ၇တော.ဘူးဖြစ်နေတယ် ။ အကျန်လေး ဘာလေး ပေးပါဦး။
ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဒါမျိုးလေးတွေ လည်း တင်ပေးကြပါ။
သိချင်သူ ကလိချင်သူတွေ အတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။
အိမ်မှာ သုံးလုံးလောက် အပျက်တွေရှိတယ်။ ကလိကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
အဘဆွေ .. နိုင်ဂံခြားမှာ ၀ယ်ခဲ.တဲ.စက်က မြန်မာခွေတွေမဖတ်တာ ကျွန်တော်သိသလောက် မြန်မာခွေတွေမှာ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက်တွေပါလို. ဖြစ်ရတာလို. ကျနော် ထင်ပါတယ်…. ကိုရာဇ၀င်လူဆိုး ၇ဲ.ခယ်မ (အငယ်လား အကြီးလားမသိ) စက်ကတော. vcd ရော dvd ပါဖတ်ပေမယ်. dvd ဇာတ်လမ်းတွဲခွေတွေကို ၂ ခန်း ၃ ခန်းပဲဖတ်နေရင်…
၁။ cover lens ကိုသန်.၇ှင်းရေးလုပ်ပါ။
၂။မ၇ရင် spindle motor ကိုလဲပါ ။ဘာကြောင်.လဲဆိုတော. spindle motoer က RPM..Round Per Minute ..တစ်မိနစ်မှာ လည်ပတ်တဲ. အပတ်ရေ ကျသွားလို.ပါ။ vcd က အပတ်ရေ နည်းပါတယ် .. dvd က အပတ်ရေများပါတယ်။ ကိုရာဇ၀င်လူဆိုး ၇ဲ.ခယ်မ စက်က vcd ရော dvd ပါဖတ်နိုင်ပေမယ်. dvd ဖတ်တဲ.အခါ ဓာတ်ပြားလည်တဲ.မော်တာက အပတ်ရေကျနေလို. ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲခွေတွေကို ၂ ခန်း ၃ ခန်းပဲဖတ်နိုင်ပြီး အဆုံးထိ မဖတ်နိုင်တာပါ။ မော်တာလဲလိုက်ပါ။ မရသေးရင်ထပ်ပြောပါ..။
ကျေးဇူးပါပဲ အိမ်မှာ EVD တစ်လုံးချောင်ထိုးထားတာ ရှိတယ် ပြင်လိုက်ဦးမယ်….အရင်ကလဲ ကလိပါတယ် ခုတော့ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့
အင်း ဒီပိုစ့်တင်တဲ့သူက EVD ပြင်တဲ့ဆရာဆိုရင် သူ့ကို ပိုတောင်လေးစားရပါဦးမယ်..
များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ပညာကို ကိုယ်လျှို့ဝှက်ထားကြတာ များတယ်လေ…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်တဲ့သူရဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ်…
နောက်လဲ ဒီလို အကျိုးပြုပိုစ်တွေရေးသားနှိုင်ပါစေ…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရွာသားတွေအတွက် အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ပြင်ဆိုင်လိပ်စာလေးများသိရင် ပေးပါဦး။